Victor Hugo. Makore 216 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe mitsara uye nhetembo nhatu | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhetembo
Iwo anozadzika nhasi, Kukadzi 26, Makore 216 kubva pakazvarwa Victor Hugo. Akazvarwa muBesançon uye zvakare aive mudetembi uye munyori wemitambo pamwe nemunyori wenhau. Inoonekwa se mumiriri wepamusoro weFrance Romanticism. Aive zvakare akazvipira uye ane simba wezvematongerwo enyika uye akangwara munhoroondo yenyika yake uye mumabhuku ezana ramakore rechiXNUMX.
Nhasi, mundangariro yake, ini ndinosarudza mamwe mashoko nezve rake rakakura basa, kunyanya, reiye watinoziva zvakanyanya, Zvinoshungurudza. Asi ini ndinosarudzawo vamwe vake sampuli nhetembo, izvo zvirokwazvo takaverenga zvishoma.
1 Chidiki chaVictor Hugo
2 Mitsara kubva kuLes Misérables
3 Nhetembo nhatu
3.0.1 Pakazosangana mweya miviri
3.0.3 Mukadzi akadonha
Chidiki chaVictor Hugo
Uye pamwe vashoma vanoziva kuti Victor Hugo aigara mukati Madrid, pakati peCalle del Clavel, achiri mudiki, kubva pakaendeswa baba vake, murume wemauto, akagadzwa kuve mukuru-mukuru.
Muna 1815 akagara mukati Paris pamwe nepfungwa yatove pachena yekuzvipira kumabhuku. Yakanga iri mudzidzi akanaka kwazvo uye pazera remakore gumi nemashanu akapihwa neFrench Academy yebasa rerwiyo. Ichi chaive chirevo chebhuku rake rekutanga guru renhetembo, Odes nhetembo dzakasiyana siyana. Muna 1822 akaroora Adele Foucher, waaive naye nevana vashanu. Uye zvakare, pamwe nehama dzake, zvakare vanyori, akatanga magazini Le Conservateur Litteraire. Aive makore ekugadzirwa kukuru kwekunyora nemazita akadai se Cromwell, Mukadzi Wedu weParis (inozivikanwa se Hunchback yeName Dame) kana Mambo anofara.
Anoshanda kwazvo mune zvematongerwo enyika, Victor Hugo akagadzwa ndima yeFrance muna 1845. Hurukuro dzake pa kusuwa uye zvimwe zvichemo zvemagariro nezvematongerwo enyika vakamutungamira kuti aparadzane neConservative Party. Muna 1851 akashora zvishuwo zveudzvanyiriri zvaNapoleon III uye, mushure mekupidigura, akatiza france. Gore rakatevera iye nemhuri yake vakaenda kuJersey kuUnited Kingdom, uye muna 1856 vakatamira Guernesey.
Kubva pamakore makumi maviri ekutapwa kwavakazvarwa Zvirango zvacho, trilogy ye Kuguma kwaSatani, Mwari y Nhoroondo yemazana emakore, uye bhuku rake rinozivikanwa kwazvo, Zvinoshungurudza. Kudzoka kuFrance, mushure mekudonha kwaNapoleon III, Victor Hugo akarumbidzwa pachena uye akasarudzwa mutevedzeri. Akafira muParis pazera ramakore makumi masere nematatu, pakukwirira kwesimba rake, aine rakatanhamara basa uye pesvedzero, izvo zvakamuita iye mucherechedzo hunhu uyo ​​akaremekedzwa neTatu Republic nemariro ehurumende.
(c) mmartinez. Kubva kuLa Vanguardia.
Quotes ye Zvinoshungurudza
Mutemo mutsvene waJesu Kristu unotonga hupenyu hwedu; asi haisati yapinda mairi. Uranda hunonzi hwakanyangarika kubva kubudiriro yeEurope, uye iko kukanganisa. Ichiripo; kungoti chete haisisiri kurema pamukadzi, uye zvinonzi chipfambi.
Mutongo wekutanga ihana.
Rudo chikamu chemweya pachawo, ndechechimiro chakafanana naiye, ipfungwa inoyera; saiye, haasviki, haugadzike, haupore. Icho chidimbu chemoto chiri matiri, icho chisingafi chisingaperi, chisingagoni kugumira kana kuderedzwa.
Izvo zvinotaurwa pamusoro pevarume, vechokwadi kana venhema, zvinotora nzvimbo yakawandisa mune yavo magumo, uye kunyanya muhupenyu hwavo, sezvavanoita.
Munyika hapana kana chinhu chakakosha kupfuura rudo.
Kwete, kuva nerudo hakurasikirwe nechiedza. Iko hakuna hupofu uko kune rudo.
Kusunungurwa haisi rusununguko. Jeri rakapera, asi haritongwe.
Usabvunze zita revaya vanokumbira hupoteri. Ndiye chaiye munhu ari kunyanya kuda hupoteri anonyanya kunetsekana kutaura zita rake.
Kune mhando mbiri dzezvinhu munyika dzinodedera zvakanyanya: amai vanowana mwanakomana wavo akarasika, uye ingwe inowana yaabata.
Avo vanotambura nekuti iwe unoda, rudo kunyanya. Kufa nerudo kurarama.
Mufaro mukuru wehupenyu kugutsikana kuti tinodiwa, tinodiwa isu pachedu; ndoda kudiwa zvisinei nesu.
Simba rakasimba kupfuura ese moyo usina mhosva.
Kana rudo rwakafadza runounza mweya pakutapira nekunaka.
Rudo rwakafanana nemuti: unokotama pasi pehuremu hwawo, unodzika midzi zvakadzama muhupenyu hwedu hwese uye dzimwe nguva unoramba uchisvibira mumatongo emoyo.
Rudo chinhu chinopisa kukanganwa.
Pakazosangana mweya miviri
Apo pakupedzisira mweya miviri inosangana,
Ndiani kwenguva yakareba vakatsvaga pakati pechaunga,
Pavanoona kuti vakaroorana,
Izvo zvinonzwisiswa uye zvinoenderana,
ipapo nekusingaperi inomuka mubatanidzwa vehement uye yakachena senge ivo,
mubatanidzwa unotanga pasi uye unogara kudenga.
Mubatanidzwa iwoyo rudo
rudo rwechokwadi, sezvazviri vashoma varume vanogona kubata,
rudo icho chiri chitendero,
Izvo zvinorevesa iye anodikanwa ane hupenyu hunobva
Yekushushikana uye kushuva uye kune iye uyo anobaira
Zvikuru ndiwo mafaro anotapira.
Musikana, dai ndaive mambo ndaizopa umambo hwangu,
chigaro changu choushe, tsvimbo yangu youshe uye vanhu vangu vanopfugama,
korona yangu yegoridhe, madziva angu eruzhinji,
uye zvikepe zvangu, izvo gungwa risingakwanise,
yekutarisa kubva kwauri.
Dai ndaiva Mwari, pasi nemafungu,
ngirozi, madhimoni ari pasi pemutemo wangu.
Uye nyonganiso yakadzika yemukati yakadzika,
kusaguma, nzvimbo, matenga, nyika
Ini ndaizopa kutsvoda kubva kwauri!
Usambotuka mukadzi akadonha!
Hapana anoziva kuti huremu hupi hwaimuremera
kana matambudziko mangani aakatsungirira muhupenyu,
Kusvikira pakupedzisira ichidonha!
Ndiani asina kuona vakadzi vanofema
uye kurwisa mhepo ine hukasha kubva kune yakaipa
uine serene mafungiro?
Kudonha kwemvura kwakarembera pabazi
kuti mhepo inodedera uye inodedera;
Pearl iyo kapu yemaruva inodurura,
uye iro ivhu kana richidonha!
Asi zvakadaro mupilgrim donhwe rinogona
kuchena kwayo kwakarasika kuti iwanezve,
ndokusimuka kubva muguruva, crystalline,
uye pamberi pechiedza kupenya.
Rega mukadzi akadonha ade,
siya kuguruva kudziya kwayo kwakakosha,
nekuti zvese zvinodzoreredza hupenyu hutsva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Victor Hugo. Makore 216 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe mitsara uye nhetembo nhatu